သင့်ရဲ့ BROWSER မှာ COOKIES များကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို, - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
သင့်ရဲ့ browser မှာ cookies များကိုဖွင့်ခြင်း
ကွတ်ကီးများ (cookies များကို) ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်စာရင်းဇယားစောင့်ရှောက်ခြင်း, စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအတွက်အသုံးပြုလျက်, settings ကိုကယ်တင်နေကြသည်။ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, browser ကိုအတွက် activated ထောက်ခံမှု cookies များကို privacy ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်. အသုံးပြုသူ cookies တွေကို enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။ Next ကိုကျနော်တို့ကသူတို့ကို activate လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင့် browser ထဲမှာ cookie ကိုဘာလဲ,
အားလုံးက်ဘ်ဘရောက်ဇာဖိုင်တွေရဲ့ဧည့်ခံများပါဝင်သည်သို့မဟုတ် disable လုပ်ဖို့နိုင်စွမ်းသည်။ ရဲ့သင်၏ browser settings ကို အသုံးပြု. cookies တွေကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါစို့ Chrome ကို google။ အလားတူလုပ်ရပ်များဖျော်ဖြေနှင့်အခြားနာမည်ကြီး browser များနိုင်ပါတယ်။
ရေပန်းစားသော web browser များအတွက်ဖွင်အဆိုပါ cookies များကိုအကြောင်းကိုလည်း Read တေးသံစုံကဇါတ်, Yandex Browser ကို, Internet Explorer ကို, Mozilla Firefox, ခရိုမီယမ်.
သင့် browser များတွင်ဖွင် cookies တွေကို
ပွင့်လင်း Google Chrome နှင့်ပြီးရင်တော့စတင်ရန် "Menu ကို" - "Settings" ကို.
link ကိုရှာနေစာမျက်နှာအဆုံးမှာ "အဆင့်မြင့် Settings" ကို.
လယ်ပြင်၌ "ကိုယ်ပိုင်ဒေတာ" ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကြောင်းအရာက Settings".
ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်တစ်စစ်ဆေးမှုများထားရာဘောင်, Start "ချွေတာ Allow".
ထို့အပြင်သင်သာအခြို့သောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဆီက cookies တွေကို၏ဧည့်ခံကို enable နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ရွေးဖို့လိုအပ် "Block ကို Third-party cookie ကိုက်ဘ်ဆိုက်များ", ပြီးတော့စာနယ်ဇင်း "ခြွင်းချက်များကိုစီမံကွပ်ကဲ".
ဒါဟာသင် cookies တွေကိုလက်ခံဖို့လိုသည့်အနေဖြင့်ဆိုဒ်များကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြီးပြီ".
ယခုတွင်သင်သည်တစ်ကြိမ်မှာတိကျတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အားလုံးအပေါ် cookies တွေကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။